Magaalaa Amboo – siifsiin
Seenaan Magaala Ambo kan barreffamee dhumu ta’uu baatus mee hanga tokko isiinif qooda. Ambo magaalaa Oromiyaa gara dhihaatti aanaa Amboo keessatti argamtu. Magaalaan Amboo naannoo Oromiyaa godina Shawaa Dhihaa kessatti argamti. Magaalaan kun Finfinneerra gara dhihaattii Kiilomeetira 125 fagaattee argaamti. Ol ka’iinsi lafaa naannoo Amboo meetira 2101 yeroo ta’u laatiitiyuudii fi loongitiyuudiin ishii 8059’N 37051’E ta’a.
Ambo keessa Yuunivarsiitii tokkoo, manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa lamaa fi manneen barnoota sadarkaa tokkoffaa baayyetu jira. Manni Barumsaa Sadarkaa 2ffaa Amboo mannen barnoota gurguddo Oromiyaasta’e biyyattii kessa jiran keessa tokko.
Akka lakkoofsa uummataa bara 2005tti, magaalaan Ambo uummata 49,421 qabdi. ibsaa turuu isaaniiti. Kana jechuun waggotaa hedduu duraadha. Amman tana baayyini uummaticha dacha illee ta’u mala.
Maddi:- Internet fi Odeennaffanno.
Previous Previous post: Seenaa Goota Oromoo Garasuu Dhukii Kutaa Tokkoffaa
Next Next post: Fayidaa tola oltumma kannen beektu?